चीनको घातले नेपालको अरबौँ बर्बाद ~हेर्नुहोस कसरी!::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
चीनको घातले नेपालको अरबौँ बर्बाद ~हेर्नुहोस कसरी!
काठमाडौं छिमेकी बदल्न सकिदैन तर ब्याबहार भने अबश्य सुधार गर्न सकिन्छ।हाल आएर वल्लो घरे खुशी हुँदा पल्लो घरे रिसाउने प्रबृधी नेपालको लागी नयाँ भने होईन।
नेपालको असल छिमेकी मानिएको चीनले अर्काे घात गरेको छ। अरबौंको नोक्सानी हुनेगरी जहाज खरिद गर्न लगाएको चाइनाले अनुभव नभएका पाइलट समेत आफ्नै देशबाट पठाएर नेपालमाथि भार थपेको छ।
नेपालमा पाइलट नहुँदा नहुँदै चीनले जहाज पठाउँदा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले थन्क्याएर राखेको छ। चीनबाट आएका ३ वटा जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमै थन्किएका छन्। जहाज एक दिन नउड्दा करोडौ नोक्सानी हुन्छ। चीनबाट आएका जहाज नेपाल आएको २÷३ महिना भइसक्दा पनि उडेका छैनन्। जसबाट हालसम्म अरबौको नोक्सानी हुन पुगेको छ।
पाइलट अभाव हुँदाहुँदै ताकेता गरेर जहाज पठाएको चीनले त्यसपछि पाइलट पठाउने कुरामा पनि मौका छोप्यो। दोब्बर महंगोमा पाइलट पठाउन दबाब दियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले चीनबाट महंगोमा ७ वटा पाइलट ल्यायो। तर ती पाइलट पनी दक्ष नभएको खुलेको छ।
यस बारेमा कान्तिपुरले पनि ति पाईलटहरु हेकिप्टर मात्र उँडाउन सक्ने भनि समाचार लेखेको थियो।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नेपाली सिकारु पाइलटलाई तालिम समेत दिनेगरी चीनबाट अनुभवी र दक्ष पाइलट ल्याएको भनिएपनि तीन पाइलटहरुमा जहाजै उडाउन सक्ने क्षमता नभएको खुलेको हो। कान्तिपुरले पनि ती पाइलट जहाज उडाउन योग्य नभएको र हेलिकप्टर मात्रै उडाउन सक्ने भन्दै विस्तृत विवरण प्रकाशन गरेका छन्।
पाइलट नहुँदै सुरुमा जहाज पठाएर नेपाललाई आर्थिक भार थपेको चीनले अनुभव नभएका पाइलट पठाएर झुक्याएको छ। यसले चीनले नेपाललाई हेर्न दृष्टिकोण प्रष्ट भएको परराष्ट्रविदहरु बताउँछन्।